Tap Factory - Mpanamboatra paompy China
Tap ny JT-3017
Famaritana ny vokatra: ity paompy monobloc chrome ity dia mitondra famafana vita an-dakozia any an-dakozia. Izy io dia mety ho an'ny rafitra sy fanerena ambany. Tafiditra ao amin'ny 1/2 ″ SP BSP vavy mora sy volondasy torolalana Fandidiana: ¼ mihodina ny tsindry rano mety: tsindry avo na ambany miaraka amin'ireo làlany mahazatra, ny paompy Ambioka vaovao dia famoronana tonga lafatra famolavolana kanto, teknolojia mandroso ary fampiasa mahafinaritra. . Ny mixer cosmopolitan mangatsiaka sy manala dia azo antoka hiaraha-miasa amin'ny ...
Tap ny JT-3022
Famaritana ny vokatra: Varahina vita amin'ny Chrome dia marihitra sy mateza mora mora diovina. Ny famafazana fangaro dia ahitana kapila seramika vita matevina ary maharitra mandritra ny fiovan'ny rano. Raha tsy azonao antoka ny fametrahana azy, mifandraisa amina matihanina. Ny fametrahana dia hatao mifanaraka amin'ny fitsipika misy eo an-toerana sy ny fitsipi-pomba. Ny fametrahana azy amin'ny lavaka 35 mm amin'ny max. Fantsona / worktop matevina 50 mm. Accor voasedra sy voamarina ...
Famaritana ny vokatra: Ny fantsom-bary mifangaro dia manana kapila mafy sy maharitra matevina izay afaka mitazona ny fikorontanana avo izay miseho rehefa manova ny hafanan'ny rano ianao. Ny paompy mixer an-dakozia dia azo ampiasaina amin'ny rafi-tsindry avo. Nanandrana nitantana tsindry max. 10 bar (1000 kPa). Ny tsindry miasa miasa: 1.0 - 5.0 bara (100 kPa - 500 kPa). Ny fametrahana azy amin'ny lavaka 35 mm amin'ny max. Fantsona / worktop matevina 50 mm. Aereratera mamonjy rano sy angovo (5.7 l / min.) Ho an'ny rafitra miakatra ambony ...
Tap ny JT-2007
Karazana antsipirihany: Faucets amin'ny fantsona, faucet amin'ny tavin-drano endrika Vahaolana amin'ny fahaizan'ny tetikasa: famolavolana sary, vahaolana feno ho an'ny tetikasa, Isa maodely fanamafisana ny sokajy: JT-2007 Fitsaboana an-tampon'ny: Faucet vita amin'ny volon-tratra: karazana hantsana tokana karazana fametrahana: Deck Mounted Isan'ny tahony: Tanana tokana Fomba: Famonon-dàlana miavaka mandritra ny ankehitriny: Famokarana vokatra seramika: ny efitra fandroana natao ho an'ny tarehy mandoro kitapo famafana vita amin'ny basin Faucet Cartridge Fiainana fiainana: 500000 ny tsingerin'olom-piainana fitsapana ny tsindry rano: 0.6-1.5Mpa 100% tsindry amin'ny ...
Vinavina fonosana: 13,2 x 6,7 x 2,9 santimetatra Lolo: Volom-borona Nickel Style Lavo lovia tokana lava fantsom-baravarana fandroana fandroana vita: Voadio fitaovana nikela ： Stainless vy endrika ： Mpangaroharo fantsom-boaloboka mahery Isan'ny loaka: 1 isan'ny tahony: 1 tahiry metaly metaly plug-n'ny Profile ： Fampitaovana an-tampon'ny Mount Deck: Fitaovana fantsom-pandehanan'ny sambo Fampiasa: Fantson'ny Singal ao anaty trano, fibatana lever dia manamora ny fanitsiana ny fikorianan'ny rano sy ny mari-pana. Ny iray mitana lavaka iray namboarina avy amin'ny vy vy, matte mainty finis ...
Peho ny JT-9008
123456 Next> >> Pejy 1/17